Hisintona, Direction Générale des Impôts
Adobe Reader no rindrambaiko izay mamela anao hijery sy pirinty PDF antontan-taratasy (Portable Document Format). Adobe Reader koa dia ahafahantsika tanteraka sy mametraka endrika PDF amin'ny aterineto.
Download vaovao fitantanana dia Download rindrambaiko tena haingana sy tena mora ampiasaina fa tena haingana entana raki-daza avy ao amin'ny Internet, toy ny toerana tena rindrambaiko, mp3 antontan-taratasy, Video antontan-taratasy, sary rakitra, sns Tsy toy ny hafa mitovy fitaovam-pandraisana, io dia 100% rindrankajy maimaim-poana, tsy misy dokam-barotra-baventy eo amin'ny rindrankajy (izay miadana ny Download), tsy misy spyware.
WinZip Archiver no miely patrana indrindra eo amin'izao tontolo izao. Io jiro mamela anao hanery ny antontan-taratasy ao amin'ny ZIP endrika. Izany fitsipika izany fanapahan-jiro hamonjy toerana amin'ny fiara mafy. WinZip dia mahasoa koa ho rehefa misintona rindrambaiko, satria ny ankamaroan'ny Archives hita ao amin'ny Internet dia amina endrika ity. WinZip fa tsy voafetra ho an'ny kely saina, ary koa endrika ZIP mamela anao hanesorana ny votoatin'ny HQX tahiry, fiarakaretsaka, TGZ, LZH na Arc, ohatra. Mampiasa ny rindrankajy dia tena tsotra satria ny Magicien mitarika anao tany amin'ny dingana isan-karazany ilaina mba hanokatra, hanova na mamorona ZIP tahiry. WinZip koa dia mampiditra an-Windows Explorer manodidina sakafo mba hanatsarana fahombiazana ianao, dia tsy maintsy hanomboka ny rindrambaiko mba hanao Archive manipulations isan-karazany.